कपिलवस्तुमा स्वतन्त्र राजनीतिक समूहको समिति गठन
कपिलवस्तु, २१ पुस । कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका वडा नं. ७ को विशुनपुरमा भेला गरी स्वतन्त्र राजनीतिक समूहको इकाई समिति गठन गरिएको छ ।
महाधिवेशनसम्म संयोजक परिवर्तनको आवश्यकता छैन : महासचिव सुमन
काठमाडौं, २० पुस । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका महासचिव मनिष सुमनले महाधिवेशनसम्म राजपामा संयोजक परिवर्तन गर्न नहुने धारणा राखेका छन् ।
काठमाडौं, २० पुस । राज्य विप्लवको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक डा. सीके राउतलाई उपचारको नाउँमा सुरक्षाकर्मीले यातना दिइरहेको आरोप लागेको छ ।
डा. भट्टराईको ट्वीट : कांग्रेस–कम्युनिष्टका त्यस्तै विद्रोह क्रान्ति हुने, थारूका चाहिं अपराध ?
काठमाडौं, २० पुस । कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित सांसद रेशमलाल चौधरीको शपथ ग्रहणलाई विवादमा ल्याउनु विडम्बनापूर्ण रहेको नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले बताएका छन् ।
प्रदेश २ : मन्त्रिपरिषदद्वारा लोकसेवा विधेयक स्वीकृत
जनकपुरधाम, १९ पुस । प्रदेश सरकारले कर्मचारीको स्थायी पदपूर्तिका लागि प्रक्रिया थालेको छ ।
रेशम चौधरीले लिए सांसदको शपथ
काठमाडौँ, १९ पुस । टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्तका रुपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसद रेशमलाल चौधरीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।
शीतलहरबाट बचाउन सांसदको आग्रह
काठमाडौं, १९ पुस । प्रतिनिधिसभामा राजपा नेपालकी सांसद रानी मण्डलले तराई मधेशका जनता चिसोबाट प्रभावित भएकाले सरकारलाई राहतको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेकी छन् ।
वाइडबडीबारे खरिदमा भएको अनियमितता बारे विवेकशील साझाको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं, १९ पुस । नेपाल वायुसेवा निगमको दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदबारे अध्ययन गर्न गठित संसदीय छानबिन उपसमितिले ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गरेको छ ।
समृद्धिको आधार विद्युत : मन्त्री चौधरी
रुपन्देही, १९ पुस । प्रदेश ५ का भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले मुलुकको समृद्धिको आधार विद्युत रहेको बताएका छन् । त्यसका लागि विद्युतको उत्पादन र सही सदुपयोग हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
विकास निर्माणको कामले तीव्रता पाउँछ : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं, १९ पुस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणका कामले तिव्रता लिने बताएका छन् ।
सांसद् रेशमलाल चौधरीको शपथ ग्रहण हुँदै
काठमाडौं, १९ पुस । कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशमलाल चौधरीको शपथ ग्रहण हुँदैछ ।
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशद्वारा शपथ ग्रहण
काठमाडौं, १८ पुस । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् ।